Factorylọ ọrụ igwe igwe China China Atc na ndị na-emepụta | JCUT
Ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ bụ ebumnuche abụọ. Maka obere obere ụlọ na obere ụlọ na osisi na-edozi ụlọ, ihe a na-arụpụta nke ọma, na nhazi nke akụrụngwa adịghị oke. Nke a nwere ike ọ bụghị naanị ịkwalite ojiji akụrụngwa, kamakwa zere ihe ize ndụ nke ịzụta akụrụngwa na ọnụahịa dị elu. Uru ị ga - eji aka gị rụọ nhazi bọọdụ bụ na ị nwere ike ijikwa oge nhazi ya na oge nhazi ya.
1. Igwe a na-eji GDZ ma ọ bụ HQD akara Ikuku Ndozi Elu. Ike ukwu 9kw, ike nhazi di elu. N'iji usoro mgbanwe akpaka akpaka, mgbanwe ngwa ngwa.
2. Ejiri ya na servo moto, ihe eji eme ihe dị elu na mbanye mbanye, nke na-eme ka igwe na-agba ọsọ nke ọma, na-enwe mkpọtụ dị ala, ọsọ ọsọ na ezigbo ịkwụ ọtọ.
3. Nnukwu akwa ịla nkịta na-arụ ọrụ dị arọ (nsị na-egwu mmiri ise nwere akụkụ 0.02mm).
4. Usoro a na –eme ka okpukpu osisi akwa nke nwere ogwe osisi gbara okirikiri gbaa agba na paịlị nchara. Ọdịdị ihe nkedo nke kọlụm anaghị emebi emebi ogologo oge.
5. Ngwunye mgba ọkụ dị elu, nsị ike. Ejiri ihe eji eme 50,00 adsorption caliber, ezi akara nke njikọta PVC, enweghị bọọdụ na-agba ọsọ.
6. Zuru ngha ka nkea n'adighi ahihia nwere ike imeghari ahihia. Ọrụ ka onye nwere ọgụgụ isi ma na-echekwa ọrụ.
7. Spindle akpaka nkebi ụdị Integrated ájá mwepụ na abụọ ájá iwepụ na pusher. Nhazi ọgụgụ isi, mee ka ihe ka njọ.
8. anyị na-eji mbubata Hiwin square train, Nice ika na ezigbo mma. Banyere nnyefe, X, Y axis na-eji ọmarịcha igwe mkpanaka, Z-axis ball sc drive. Nzube dị elu nke igwe igwe, siri ike ma dịgide.
Igwe a bụ ihe eji arụ ọrụ ụlọ a na-eji arụ ọrụ nke ndị ụlọ ọrụ kabinet rụpụtara nke ọma. O dabara adaba maka oche ụlọ ọrụ na ngwa ndị ọzọ, ịkpụ, na-ese ihe, na-egwu ala, na -eme ọtụtụ ihe, ichekwa ego, ọrụ na oge. , Kabel akpụkpọ ụkwụ, arịa ụlọ ọfịs, arịa ụlọ.
Longteng ọgbọ nke atọLinear R8 ATC CNC Router
Mpaghara ọrụ （S * Y * Z） 1220 * 2440 * 200mm (（nkwado ogologo 2800 ịhazi ya）
Ọsọ nke mkpi 0-24000 / MIN
Gbasaa GDZ ikuku jụrụ 9KW
Akwukwo oru Ngwaọrụ Linear 12 (na-akwado nhazi ngwaọrụ 8-16)
Ije ozi moto Dorna 1500W （2 n'ime 1 ọkwọ ụgbọ ala）
Na-efe ọkwọ ụgbọala Na-akwado ndị ọkwọ ụgbọala
Onye na-agbanwe agbanwe 11kw Hpmant
Sistemụ Njikwa Ihe mmekọrịta 60 Taiwan
Nzipu nnyefe Y axis 30 square
Ihe nkedo bọọlụ Ịghasa TBI 2510
ihe mmịfe Y aixis30 mmịfe
Ikwusi Pụrụ iche maka igwe ịkpụ
eriri Igwe eji eji akwa mmiri tolitere di elu
Mee ka okwu gị rụọ ọrụ 35000MM / MIN
Onye na-anakọta uzuzu Akpa abụọ. 5.5KW
Vumpum mgbapụta Osimiri mmiri 7.5KW
Ibu ibu 2600KG
Ọgbọ nke atọ Lonteng patenti planning （
Ihe ndina Nnukwu ọgwụgwọ ịka nká dị ukwuu (nsị ihu ise na nkenke ala 0.02mm)
Ngwunye ụlọ nwere ihe mgbochi okirikiri mgbidi yana mpempe ígwè dị ka ịgbanyụ ọrụ nke ihe nkedo ahụ anaghị emebi emebi ogologo oge.
Kọmị ọrụ kọmputa Longteng patent kabinet usoro, mechiri emechi nnukwu ihuenyo ọgụgụ isi ọrụ kabinet
mejuputara ya Ọkpụkpọ mkpọchi moto Z axis, eriri igwe na-akwado eriri oche
Tebụl friji Ekebe patent 50MM adsorption caliber, PVC pipe njikọ akara aka dị mma, anaghị agba ọsọ
Ngwa ihe mmetụta ụzọ Ihe njikwa ngwaọrụ
Nri ndozi Ihe mkpuchi nke nwere uzo abuo dika ihe eji eme ihe
Na-ebudata onwe Zuru nghafu eriri eji emechi emechi alịlịsị rụọ ọrụ na arụ ọrụ ngwa ngwa
Dzọ na-emebi emebi Akpaaka na-ewepu ihe na - ewepu ihe na - ekpochapu uzuzu na iwepu uzuzu nke abuo.
Nke gara aga: Linear atc cnc rawụta
Osote: Ihe nnweta 1325 diski atc cnc rauter